Revolve Camera: Rafitra Dolly ho an'ny iPhone na DSLR | Martech Zone
Talata, Aogositra 6, 2013 Alatsinainy, Aogositra 5, 2013 Douglas Karr
Nanoratra momba ny fitaovana fanoratana horonantsary fototra ny orinasa rehetra dia tokony hanana raha te-handefa horonantsary kalitao ho an'ny orinasany. Raha efa nijery horonantsary manara-penitra studio ianao, dia nahatsikaritra ny làlana sy ny rafitra dolly naparitak'izy ireo hanomezana tifitra finday miavaka sy malefaka.
$ 99, azonao atao izao ny Revolve ny rafitra Camera Dolly ho an'ny DSLR na $ 139, ny finday avo lenta. Ity misy topy topimaso tsara momba ny vokatra sy ny karazana tifitra azonao atao. Manana kojakoja vitsivitsy izy ireo - ary manana rafitra làlana azonao ampidirina aza!
Araka ny Fanaperena fakan-tsary toerana:
Ny Revolve camera dolly dia sehatra iray ahazoana sary an-tsary milamina sy mavitrika. Ity rafitra ity dia afaka mamorona karazan-tsary fitifirana isan-karazany sy tifitra dolly mihodinkodina ary koa fotoana fohy ary ajanona ny sary mihetsika. Izy io dia mifanaraka amin'ny fakan-tsary rehetra, ary mety ampiasaina amin'ny sehatra rehetra sy amin'ny toerana rehetra.
Ny famaky azo ovaina dia mamela ny dolly handeha amin'ny tsipika mahitsy, na amin'ny zoro mihodina amin'ny zoro rehetra. Ny rafitra dia misy kit ny lalamby izay mamela ny dolly hampiasaina amin'ny toerana rehetra mba hahazoana horonan-tsary milamina na dia amin'ny tany mikitoantoana aza. Ampio ny fantsonao / tehinao manokana mba hamoronana làlan-tsarimihetsika amin'ny halavany rehetra! Ny kofehin'ny lalamby tsirairay dia kofehy hanaiky ny tripod mount mba hahafahanao mampiasa ny lalamby amin'ny haavo rehetra, na mamorona sary mihetsika na mandà ny sary slider.
Kalandrie momba ny marketing amin'ny mailaka 2013